Gbasara anyị - LumLux Corp Co., Ltd.
Gbado anya na osisi ntụkwasị ọkụ 15 afọ
Growgba Egwuregwu Stadium
Osisi ụlọ ọrụ ọkụ
Ihe Omume Ahia
LumLux Corp. bụ ụlọ ọrụ dị elu nke teknụzụ nke raara nye R & D, mmepụta na ire ahịa nke HID na ikanam na-eto eto na ihe njikwa ọkụ ma na-enyekwa ụlọ ụlọ griin haus na ụlọ ọrụ ihe ọkụkụ. Companylọ ọrụ ahụ dị na Panyang Industrial Park, Suzhou, nke dị n'akụkụ Shanghai-Nanjing Highway na Suzhou ringway ma na-anụ ụtọ netwọọdụ okporo ụzọ.
Kemgbe ntọala ya na 2006, Lumlux arara onwe ya nye R & D nke ọkụ ọkụ na arụmọrụ na njikwa na ọkụ ọkụ ọkụ na ọkụ Ọha. E tinyewo ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ na Europe na America ma merie ahịa ụwa na aha ụwa maka ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ nke China.
Na ụlọ ọrụ ọkọlọtọ ekpuchi karịrị 20,000 square mita, Lumlux nwere ihe karịrị 500 ọkachamara mkpara nke dị iche iche ubi. Kemgbe ọtụtụ afọ, ịdabere na ike ọrụ siri ike, ikike ọhụụ na-enweghị atụ na ogo ngwaahịa dị mma, Lumlux bụ onye isi na ụlọ ọrụ ahụ.
LumLux anọwo na-agbaso na nkà ihe ọmụma nke na-abanye àgwà ịrụ ọrụ siri ike na njikọ njikọ ọ bụla, yana ike ọkachamara iji mepụta ogo pụrụ iche. Companylọ ọrụ ahụ na-emezi usoro mmepụta ihe mgbe niile, na-arụpụta usoro izizi na usoro nyocha nke ụwa, na-a attentiona ntị na njikwa nke isi ọrụ ọrụ, ma na-etinye ụkpụrụ RoHS n'akụkụ niile, iji ghọta oke njikwa na njikwa njikwa.
Site na mmepe nke mmepe ugbo nke oge a, LumLux ga-aga n'ihu na-akwado nkà ihe ọmụma ụlọ ọrụ nke "iguzosi ike n'ezi ihe, nraranye, arụmọrụ na mmeri - mmeri", na-akwado ndị mmekọ na-etinye aka n'ubi ugbo, gbalịsie ike maka echi ka mma site na mmezi ọrụ ugbo.
ọhụụ: Iji ikike ọgụgụ isi nye ikike iji mepụta ọdịnihu ka mma
Bụrụnụ ndị na - emepụta ngwa ọrụ nwere ọgụgụ isi ụwa, na - enye ngwaahịa na ọrụ dị ike na nke ọma
Ndị mmadụ - agbakwunyere ọrụ mbụ ọhụrụ iru
Iguzosi ike n'ezi ihe, ofufe, ịdị irè, ọgaranya
Honlọ ọrụ Sọpụrụ
Ọkụ Na-eto Eto, Smart Dugara Light Fixtures, White Too Light, Igwe ọkụ zuru oke,